5 picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como
တောက်ပအပြာရောင်ရေနှင့် luscious အစိမ်းရောင်တောင်များမှာထွက်ရှာဖွေနေစဉ်ရိုးရာအီတလီဗိသုကာနေရခြင်းသည်သင်၏နံနက်ကော်ဖီသောက်ခံစားရန်ထိုင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ကိုယ့်အိပ်မက်နဲ့တူဒီတန်ခိုးသည်အသံနေစဉ်, ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ရေကန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်. ဤ ဦးတည်ရာကို stunning အများအပြားခရီးသွားများအတွက်၏ဆန္ဒစာရင်းထဲမှာပေါ်မှာထိုင်. သူကတောင်နှင့်အတူငွေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့၎င်း၏လမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ဟောလိဝုဒ် hits နှင့်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်! အီတလီ၏အနောက်မြောက်ဘက်ထောင့်ရှိ Lake Como မုသာစကား, အဆိုပါဘေးမှာလက်ယာ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း. ဒီ၏ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် အံ့သြဖွယ်သဘာဝအံ့သြစရာ အံ့သြဖို့သေချာဖြစ်ကြောင်းမြောက်မြားစွာမြို့များဖြစ်ကြသည်. သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအချိန်ဇယားအပေါ်လျှင်အလည်အပတ်ခရီးမှရသောသူတွေကိုကောက်နေတဲ့ daunting တာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျအချိန်ပေါ်တိုတောင်းနေကြသည်နှင့်သင့်ရဲ့အများဆုံးထွက်စေလိုလျှင် ခရီးစဉ်, ဒီမှာပါ5ရေကန် Como အပေါ်သွားရောက်ပါမြို့ရွာ.
1. picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como: အဖြစ်
Como မြို့ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးကြောင့်၏ဧရိယာ၌ရှိသမျှသောမြို့လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဘူတာရုံ. ဒါဟာကတည်းကအများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်စတင်အမှတ်ဖြစ်ပါသည် ရထားစီးနင်း Como ရောက်ရှိဖို့ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အခြို့သောကြောင့် Como ၏ကျန်သွားရောက်ခြင်းနှင့်ကြုံနေရ၏သူတို့ရဲ့ခရီးအတွက်တိုတောင်းတဲ့မှတ်တိုင်ကိုစဉ်းစားနေစဉ်, အခြားသူတွေအတွေ့အကြုံများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မြင်. အဆိုပါရောနှောခံစားချက်တွေကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်မြို့လူကြိုက်များမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပိုကြီးတဲ့မြို့ရွာတို့တွင်, ထိုသို့င်း၏ခရီးသွားဧည့်အယူခံအပြည့်အဝလက်ခံထားပြီး. တချို့လူတွေကဒီကိုချစ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူမြင်ကွင်းများတက်စိမ်ဖို့အချိန် ယူ. ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု ဤလှပသောမြို့. သို့သျောလညျး, အခြားသူတွေကိုသူတို့နဂိုအတိုင်းနှင့်စစ်မှန်အီတလီမြို့များထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အသေးငယ်မြို့ကြီးများမှရချင်.
တချို့ဧည့် Como တစ်ခရီးသွားဧည့်ထောင်ချောက်ကိုစဉ်းစားနေစဉ်, သူတို့ကဒီ၏မူလအလှတရားကိုလျစ်လျူရှုလေ့ရှိပါတယ် ရှေးဟောင်းမြို့. သငျသညျ Como ရှာဖွေစူးစမ်းတစ်ခုလုံးကိုရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းနှင့်နေဆဲကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်သောအရာတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ. တကယ်တော့, မြို့နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆုံးခြင်းကိုမွို့မှတဆငျ့လမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်ကိုယူသောခရီးသွားများအများအပြား. အများကြီးရှိစေခြင်းငှါ, ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင် ခရီးသွားဧည့်များ၏ရောက်လာရည်ရွယ်. သို့သျောလညျး, လည်းရှိပါတယ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်. ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တည်နေရာများ ပိုးပြတိုက်, အဆိုပါ 15ကြိမ်မြောက်ရာစုဘုရားကျောင်းမှာ, အဆိုပါ Porta က Pretoria, နှင့်အလယ်ခေတ်အလယ်ဗဟိုပိုစွန့်စားစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်း.
Bellagio ကွာ Como ကနေပဲကူးတို့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသူ့ရဲ့တည်နေရာနှင့်အလှအပအတှကျအကျော်ကြား. ဒါဟာနှစ်ဦးကိုရှက်စအိုင်ကိုစူးပြည်မှဖြစ်သောတြိဂံအပိုင်းအစပေါ်ကနေထိုင်. အဆိုပါမြို့တက်ကျင့်သောသူတို့အားတစ်ညားမြင်ကွင်းမတ်စောက်သောတောင်ကုန်းများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများပေါ်တွင်တည်ရှိသည် cobbled လမ်းများ နှင့်လမ်းကြားအကွေ့အကောက်များသော. အတော်များများကဒေသခံတွေနှင့်ခရီးသွားဧည့်ရေကန် Como ၏ဦးရစ်သရဖူရတနာ Bellagio ကိုပဌနာ. တကယ်တော့, ဒါဟာဥရောပမှာအလှဆုံးမြို့များကိုတစ်ဦးအဖြစ်မဲပေးခဲ့သညျ. ဒါဟာခြောလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအများဆုံးထိုဒေသတွင်သွားရောက်ခဲ့. သငျသညျရောက်လာပြီးတာနဲ့, သငျသညျအဘယျကွောငျ့နားလည်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ Bellagio သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့လျှင်, သင်တို့နှင့်အတူရှိကင်မရာကိုရောက်စေဖို့သေချာပါစေ. သငျသညျစုံလင်ရုပ်ပုံပေးမည်နေရာတစ်နေရာလည်းမရှိဆိုပါက, ဒါဟာကျိန်းသေ Bellagio ဖြစ်ပါသည်.
Verona Como မှရထား
3. picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como: Varenna
ရေကန် Como ၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေတွင် Varenna တည်ရှိသည်. ကပိုကြီးတဲ့မြို့များမှအရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်မရစေခြင်းငှါ, စဉ်တွင်, ကသေးမဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးတည်နေရာဖြစ်ပါသည်. ဒီအပါအစဉ်အလာအီတလီငါးဖမ်းရွာကြီးတွေမြို့အသက်တာ၏ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားရာမှဝေးရစလေိုကွောငျးမည်သူမဆိုများအတွက်-တွေ့မြင်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. အချိန်ကိုသင်အပြာရေနှင့်မောက်စ်တင်တောင်များမှာဆိပ်ကမ်းဆီနှင့်ပြူးကြည့်ပေါ်မှာထိုင်အဖြစ်ရပ်နေဟန်. သင်၌အရာခပ်သိမ်းကိုယူပြီးတာနဲ့, အဆိုပါ cobbled လမ်းကြောင်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့တဝိုက်လမ်းလျှောက်, ပါ ဘုရား, Varenna နှင့်အံ့မခန်း Villas. အမှတ်အသားမှသေချာပါစေ ဗီလာ Monastero ကြည့်ရှုရန်သင့်မြင်ကွင်းများအပေါ်. ဒါဟာအမြဲတမ်းအများပြည်သူပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်သင်ကံကောင်းလျှင်, villa ၏ရိုးရာအီတလီမျက်နှာစာနှင့်အတွင်းပိုင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. သငျသညျအိုင်မှာထွက်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းထူးခြားဆန်းပြားသစ်ပင်ပန်းမန်များအပြည့်အဝရှည်နှင့်ပါးလွှာဥယျာဉ်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ယူပါ.
မီလန် Varenna မှရထား
Florence Varenna မှရထား
ဂျီနိုအာ Varenna မှရထား
ရေကန် Como ၏အနောက်ဘက်ဘဏ်များတွင်, သငျသညျ Menaggio ၏လှပသောမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. Menaggio က၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များအဘို့များစွာသောဆွဲဆောင်ကြောင်းပိုကြီးတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး, လှပသောဗိသုကာ. အစဉ်အလာအီတလီမြို့နှင့်အတူပတျဝနျးကငျြမှာသဘာဝအလှတရား Blend ၏အရောအနှော. မြို့ 19 ရာစုမှအဆောက်အဦးများကြောင်းနေ့စွဲကျောတွေအများကြီးရှိပါတယ်. အဆိုပါ Piazza Garibaldi မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံးဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဗဟိုစုရုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အသက်တာနဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်းကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်. Menaggio လည်းသမိုင်းချစ်သူများများအတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. မြို့ပထမနှင့်ဒုတိယကမ်ဘာစစ်ပွဲများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ. ဒီနေ့ခေတ်, ထိုဒေသတွင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းများရန်သင့်အားယူနိုငျသောမြောက်မြားစွာခရီးစဉ်ရှိပါတယ်.
Como ရထားမှ Modena
5. picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como: Tremezzo
သင်တစ်ဦးခမ်းနားဟိုတယ်အပေါငျးတို့သဇိမ်ခံနှင့် esthetics နှင့်အတူရေကန် Como တွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Tremezzo သွားရောက်ကြည့်ရှု. Tremezzo ရေကန်၏လူကြိုက်များနှုတ်ဆက်ပြီးခဲ့ပြီးဧည့်သည်များအတွက်ထူးခြားသောနှင့်ဇိမ်ခံအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏ပိုရိုးရာကြည့်နှင့်ခံစားခြင်းမှဝေးခေါ်သော်ငြား, Tremezzo နေဆဲအလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုအံ့သြစရာမြို့သည်အ. ဒါဟာနေဆဲကအချို့သောဘတ်ဇ်ရှိကြောင်းတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာအရပ်မြင်ချင်ကြောင်းအတော်လေးနီးစပ် Bellagio ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အများအပြားများအတွက်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်. မြို့ထဲတွင်ဟိုတယ်နှင့် Villas ဧည့်သည်တွေအများကြီးမောင်းနေစဉ်, မြို့နေဆဲအချို့သောအံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းများရှိပါတယ်. စိန့်များ၏ဘုရားကျောင်း. မာရီယာ, ဥပမာ, မက်ဒေါနား Nera ၎င်း၏မယုံနိုင်စရာရုပ်တုအဘို့ရေပန်းစားသည်. အပြင်ကနေ, ရှိပါတယ် လမ်းလျှောက်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်တော် နှင့် Como ရေကန်၏မြင်ကွင်းများနှင့်အသံခံစားပါ.
Piacenza Como မှရထား
Como ရထားမှ Livorno
ဤရွေ့ကားရုံများမှာ5ရေကန် Como အပေါ်သွားရောက်ပါမြို့ရွာ. သို့သျောလညျး, အိုင်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုကိုမှရှုခင်းနဲ့လှပတဲ့မြို့များ stunning ထက်အများကြီးရှိပါတယ်. ခရီးစဉ်ကိုရေကန် Como နှင့်ပျော်စရာရေလှုပ်ရှားမှုများပျော်မွေ့, အံ့သြဖွယ်နေဝင်ဆည်းဆာ, နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဘာ့ဂ်. စာအုပ်တစ်ရထား နှင့်ရေကန် Como ကရရှိထားသူပတျဝနျးကငျြအံ့ဘွယ်သောအမှုစူးစမ်း.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fpicturesque-towns-lake-como%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#LakeComo ခွေးရူး europetravel eurotrip ကျိုက်ထီးရိုး ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား travelitaly